पोर्टल:इतिहास - विकिपिडिया
गणित र तर्क
प्राचीन जर्मनी संस्कृति
इतिहास शब्द (इति + ह + आस; अस् धातु, लिट् लकार अन्य पुरुष तथा एक वचन) को तात्पर्य हो "यो निश्चय थियो" । ग्रीसमा इतिहास लाई "हिस्ट्री" (History) शब्दको प्रयोग गर्थे । "हिस्ट्री" को शाब्दिक अर्थ "बुन्नु" थियो । अनुमान गर्न सकिन्छ कि ज्ञात घटनाहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट बुनेर यस्तो चित्र उपस्थित गर्ने कोशिश गरिन्थ्यो जुन सार्थक र सुसम्बद्ध बन्न सकोस । यस प्रकार इतिहास शब्दको अर्थ हो - परम्परादेखि प्राप्त उपाख्यान समूह (जस्तै कि लोक कथा, बीरगाथा, महाभारत) अथवा ऐतिहासिक साक्ष्य । इतिहास अन्तर्गत हामी जुन विषयको अध्ययन गर्छौ त्यसमा अहिले सम्म घटित घटनाहरू अथवा त्यो सँग सम्बन्ध राखने घटनाहरूको कालक्रमानुसार वर्णन हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा अहिले सम्मको उल्लेखित विशिष्ट घटना नै इतिहास हो अथवा प्राचीनतादेखि नवीनता तर्फ आउने मानवजाति सँग सम्बन्धित घटनाहरूको वर्णन नै इतिहास हो ।
एसियाका ठूला देशहरू चीन र भारतको बीचमा हिमालयको काखमा बसेको नेपालको इतिहास यस क्षेत्रका अन्य देशहरूको भन्दा फरक छ। नेपालदेखि दक्षिणपट्टि रहेका देशहरू विदेशी अधिनमा रहँदा पनि नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा रहिरह्यो । विभिन्न धर्मशास्त्र तथा पुराणहरूमा नेपाललाई अत्यन्तै प्राचीन भूमिको रूपमा वर्णन गरिएको छ । करीब १३ करोड वर्ष अगाडि बनेका यहाँका पर्वत शृङ्खलाहरू र उपत्यकाहरूमा पछि आएर प्राणीहरूको आकर्षण विशेष रूपमा बढ्दै गएको पाइन्छ । पश्चिम नेपालको बुटवल क्षेत्रमा पाइएको रामापिथेकस मानवको अवशेषले एक करोड वर्षभन्दा अगाडिदेखि नै नेपालमा मानवको बसोबास शुरू भइसकेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ । नेपाल नामको पहिलो उल्लेख अथर्वपरिशिष्टमा गरिएको पाइन्छ । अथर्वपरिशिष्टको समय निश्चित गर्न नसकिए तापनि इसापूर्व ५००–६०० को बीचमा यसको निर्माण भएको मानिन्छ । यसमा नेपाललाई कामरू, विदेह उदुम्बर, अवन्ती र कैकय देशहरूसँगै राखी चर्चा गरिएको छ । मूल सर्वास्तिवाद, विनयवस्तु नामको बौद्ध ग्रन्थमा पनि नेपालबारे चर्चा गरिएको छ । यसमा भगवान बुद्धको समयमै उनका चेलाहरू व्यापारीहरूका साथ नेपाल पसेको घटना उल्लेख गरिएको छ । महाभारत वनपर्वमा नेपाललाई विषय (देश) को रूपमा वर्णन गरिएको छ । जैन ग्रन्थ आवश्यक सूत्र तथा कौटल्यको अर्थशास्त्र (ई.पू. चौथो शताब्दी) ले पनि नेपालको बारेमा उल्लेख गरेका छन्।त्यस्तै भारतीय गुप्त सम्राट समुद्रगुप्तले आफ्नो इलाहाबाद अभिलेखमा आसाम र किर्तिपुर (कुमाउँ) नेपालको उल्लेख छिमेकी राज्य को रूपमा गरेका छन् भने त्यसपछिका प्रायः सबै स्श्रोतहरूले नेपालको उल्लेख स्वतन्त्र राज्यको रूपमा नै गरेका छन् । नेपालका शिलालेखहरूमा भने वि.सं. ५२२ पछि पाइएका अभिलेखमा नेपाल शब्दको उल्लेख भएको छ । यसरी यो मुलुक अत्यन्तै प्राचीन समयदेखि नै नेपाल नामबाट परिचित रहेको स्पष्ट हुन्छ । नेपाललाई सत्य युगमा सत्यवती, त्रेता युगमा तपोवन र द्वापर युगमा मुक्तिसोपान भनिन्थ्यो र कलि युगमा नेपाल भन्ने गरिएको कुरा हाम्रा पौराणिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ ।
नयाँ सामग्री देखाउने
नालापानीको युद्ध (Battle of Nalapani) नेपालले ब्रिटिश सरकारसँग लडेको पहिलो साहसिक युद्ध थियो । जसमा गोर्खाको घर अधीनमा ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाली सेना बीच लडाईं भएको थियो । नेपालको इतिहासमा उल्लेख गरिए अनुसार सन् १८१४ अक्टोबर २२ का दिन अङ्ग्रेज सेनानायक जनरल गिलेस्पीले आफ्ना फौज लिएर देहरादून प्रवेश गरेका थिए । देहरादून कब्जा गर्ने अङ्ग्रेजहरूको योजना विफल पार्न नेपालका सेनापति अमरसिंह थापाले उक्त इलाकाको रक्षार्थ कप्तान बलभद्र कुँवरलाई खटाएका थिए ।
श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाह (वि.सं.१७७९-१८३१) शाहबंशीय राजा थिए । स-साना राज्य रजौटामा बाँडिएको बाईसे तथा चौबिसे राज्यहरूलाई एकत्रित गरी एउटै देशको सृजना गर्ने यिनी आधुनिक नेपालको राष्ट्रनिर्माताको रूपमा चिनिन्छन् । यिनको सम्झनामा पुष २७ गते नेपालमा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने गरिन्छ । यिनले स-साना क्षेत्र जस्तै (भिरकोट, कास्की, लम्जुङ्ग र गोरखा) मा राज्य गरिरहेको शाहवंशलाई पुरै नेपालको राजवंशमा रूपान्तरण गरिदिए र आधुनिक नेपालको जग बसालेका थिए । पृथ्वीनारायण शाहले सुरू गरेको एकिकरण अभियान बढ्दै गएर नेपाल राज्यको सिमाना पूर्वमा टिष्टा नदी, दक्षिणमा मगध र पश्चिममा सतलज नदी सम्म विस्तार भयो । पछि नेपाल अंग्रेज युद्ध पछि सुगौली सन्धि सम्म यो भू-भाग नेपाल अधिनस्थ थियो ।
नेपालको इतिहासका शीर्षस्थ पुरूष पृथ्वीनारायण शाहले वि.सं. १८३१ माघे संक्रान्तिका दिन ५२ वर्षको उमेरमा नुवाकोट जिल्लाको देवीघाटमा देहत्याग गरे पनि नेपाल एकीकरण अभियान बुहारी रानी राजेन्द्र लक्ष्मी, छोरा बहादुर शाह लगायतले अगाडि बढाइरहे ।
के तपाईलाई थाहा छ?...
...डा. फुहररले लुम्बिनीको उत्खनन् गरेपछि सन् १ डिसेम्बर १८९६ मा भगवान गौतम बुद्धको (चित्रमा) जन्म लुम्बिनीमा भएको पत्ता लागेको थियो ।
...सर्वप्रथम ओलम्पिक खेल ग्रीसमा ईसापूर्व ७७६ मा भएको थियो ।
...सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर नेपालले आफ्नो एक तिहाई भू-भाग ब्रिटिश भारत समक्ष गुमाउनु परेको थियो । त्यसै सन्धिबाट सिक्किम माथिको अधिकार पनि गुमाउनु परेको थियो ।
विकिपिडिया:इतिहासमा आज/जुलाई ७
मन्दिर त्यही पुग्छ जो धन्यवाद दिन जान्छ, माग्न होइन
—  आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जसलाई शंकर भगवद्पादाचार्यको नामले पनि जानिन्छ, वेदांतका अद्वैत मतका प्रणेता थिए। उनको विचारोपदेश आत्मा र परमात्माको एकरूपतामा आधारित छन् जसको अनुसार परमात्मा एउटै समयमा सगुण र निर्गुण दुइटै स्वरूपमा रहन्छ। स्मार्त संप्रदायमा आदि शंकराचार्यलाई शिवको अवतार मानिन्छ।
पुरातत्त्वशास्त्र त्यो विज्ञान हो जो पुरानो चीजहरूको अध्ययन एवम् विश्लेषण गरेर मानव-संस्कृतिका विकासक्रमलाई बुझ्ने एवम् त्यसको व्याख्या गर्ने कार्य गर्दछ ।
तपाई गर्न सक्नुहुन्छ
प्राचीन नेपाल • प्राचीन मिश्र • प्राचीन जर्मनी संस्कृति • प्राचीन ग्रीस • प्राचीन जापान • प्राचीन निकटपूर्व • प्राचीन रोम • पुरातत्त्व • ब्रिटिश साम्राज्य • बुल्गारिया साम्राज्य • यूनानी साम्राज्य • शास्त्रीय सभ्यता • औपनिवेशिकवाद • प्रकोप • जर्मन साम्राज्य • शौर्यशास्त्र • क्यानाडाको इतिहास • विज्ञानको इतिहास • भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन • खितान • मेसोअमेरिका • मध्य युग • नाजी जर्मनी • नयाँ फ्रान्स • रूसी साम्राज्य • ससानियन साम्राज्य • सोभियत संघ • वायमर गणराज्य • युद्ध
वर्षका दिनहरू • वर्ष
ढाँचा:सामाजिक विज्ञान ढाँचा:मानविकी ढाँचा:समय विषयहरू ढाँचा:घटनाक्रम
इतिहास • अवधि • क्षेत्र • विषय • जातीय समूह • इतिहासशास्त्र • पुरातत्व • तस्बीर • नक्सा • पुस्तक • पत्र पत्रिका • संगठन • काल्पनिक • संग्रहालय • छद्मइतिहास • अपूर्ण लेखहरू • समयरेखा • घटनाक्रम • मानिस •
विश्वका चर्चित घटनाहरू
इतिहास विकिपुस्तक इतिहास कमन्स इतिहास विकिसमाचार इतिहास कथन इतिहास विकिस्रोत इतिहास विकिभर्सिटी इतिहास विक्सनरी
खुला पुस्तक कमन मिडियाको भण्डार खुला समाचार कथन भण्डार खुला श्रोतमाध्यम विश्वकोश परिकल्पना शब्दकोश
सबै पोर्टलहरू परिदृश्य शब्दावली सूचकाङ्क सूची रूपरेखा श्रेणी
सन्दर्भ संस्कृति भूगोल स्वास्थ्य इतिहास गणित प्रकृति मानिस दर्शन धर्म समाज प्रविधि
के हो पोर्टल?
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=पोर्टल:इतिहास&oldid=628240" बाट अनुप्रेषित
स्रोत सम्पादन गर्ने
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक २२:५८, २३ डिसेम्बर २०१७ मा परिवर्तन गरिएको थियो।